သင်သိပါသလား….ကမ္ဘာပေါ် မှာ တန်ခိုးအကြီးဆုံး ဘုရား နှင့် ဆုတောင်းအပြည့်ဆုံး ဘုရား ဘယ်မှာလဲ – Shwe Likes
သင်သိပါသလား….ကမ္ဘာပေါ် မှာ တန်ခိုးအကြီးဆုံး ဘုရား နှင့် ဆုတောင်းအပြည့်ဆုံး ဘုရား ဘယ်မှာလဲ
Shwe Nay | March 27, 2020 | Knowledge | No Comments
ကမ္ဘာပေါ် မှာ တန်ခိုး အကြီးဆုံး ဘုရား(အရှင်ဆန္ဒာဓိက)
သည်ဘုရားက တန်ခိုးကြီး တယ်၊ ဆုတောင်းပြည့််တယ် ဆိုရင် လူအများက စဉ်းစားမနေတော့ ပဲ၊ ဝိုင်းအုံသွားလေ့ရှိ ကြပါ တယ်။ ဘုရားအားလုံးက ဂေါတမမြတ်စွာ ဘုရားကို ရည်စူးတည် ထားကြ တာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ကွဲပြားတဲ့ ကိုးကွယ်မှု။
ပုထုဇဉ်တွေ က စေတီကို ကိုးကွယ်ကြ ပါတယ်။ တရားအသိ ရရှိလာကြတော့ ဂုဏ်တော်ကို ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ အရိယာများက သစ္စာ၎ပါး တရားကို ကိုးကွယ်ကြ ပါတယ်။
အရဟံ ဂုဏ်တော်ကို ပွားများနေလျှင် နှလုံးသားတောင် ထိပ်ပေါ်မှာအရဟံစေတီ တည်နေခြင်းပါပဲ။
သဒ္ဓါဆိုတဲ့ မြေသားကျောက်သားတွေ နဲ.ပြည့်စုံရ ပါမယ်။ အရဟံ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုသေသေချာချာသိရပါမယ်။ ပွားများခြင်းရဲ.တန်ခိုးသတ္တိတွေ အပေါ်မှာ ယုံကြည် ရမယ်။ ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါ၊ သိမြင်တဲ့ ပညာနဲ.အထပ်ထပ် ပွားများနေရင် နှလုံးသားမှာ အရဟံစေတီတော်မြတ်ကြီး တဖြည်းဖြည်း မြင်တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို.တတွေကပါဠိလူမျိုးတွေ မဟုတ်တဲ့ အတွက် အရဟံ၊အရဟံလို.ပါဠိသက်သက် ချည်းရွတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။” အရဟံ – ကိလေသာ ကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား ” မြန်မာအနက်နဲ.တွဲရွတ်ရပါမယ်။
၅. ဆရာတော်ကြီးများ ရှင်းလင်းချက်။
ဥပမာ…” အရဟံ”လို.ပုတီးတစ်ပတ် ၁၀၈လုံးရွတ်နေ တဲ့အခါ ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါ်မှာ အာရုံမရောက်တော့ ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကိလေသာ ကင်းခြင်းဆိုတဲ့ စိတ်အရည် အသွေးပေါ်မှာ အာရုံမရှိတဲ့ အတွက် မိမိရဲ.အရဟံစေတီဟာ သိပ်ပြီးကြည်ညိုဖွယ် မရှိ၊ မသပ္ပါယ်တော့ပါဘူး။
ဘာဝနာဆိုတာက စိတ်၏ အလုပ်ပါ။ စိတ်၏ စွမ်းရည် မပြည့်ဝသေးရင် တန်ခိုးသတ္တိတွေ ကလည်းမစွမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ ဂုဏ်တော် အပေါ်မှာကြည်ညို နှစ်သက်ဝမ်းသာ ငြိမ်းအေးပီတိအားကောင်းနေဖို.ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
ပြင်ပမှာတည်ထားတဲ့ ဘုရားက အလကားနေရင်း အလိုအလျောက် ကိုယ့်ကို လာပြီး ကျိုးမပေးပါဘူး။ ကိုယ့်နှလုံးသားမှာတည်တဲ့ ဘုရားက သာတန်ခိုးအကြီးဆုံးပါပဲ။ သန်းဝင်း
ကမ်ဘာပျေါ မှာ တနျခိုး အကွီးဆုံး ဘုရား(အရှငျဆန်ဒာဓိက)
သညျဘုရားက တနျခိုးကွီး တယျ၊ ဆုတောငျးပွညျ့တယျ ဆိုရငျ လူအမြားက စဉျးစားမနတေော့ ပဲ၊ ဝိုငျးအုံသှားလရှေိ့ ကွပါ တယျ။ ဘုရားအားလုံးက ဂေါတမမွတျစှာ ဘုရားကို ရညျစူးတညျ ထားကွ တာဖွဈပါတယျ။
၂။ ကှဲပွားတဲ့ ကိုးကှယျမှု။
ပုထုဇဉျတှေ က စတေီကို ကိုးကှယျကွ ပါတယျ။ တရားအသိ ရရှိလာကွတော့ ဂုဏျတျောကို ကိုးကှယျကွပါတယျ။ အရိယာမြားက သစ်စာ၎ပါး တရားကို ကိုးကှယျကွ ပါတယျ။
အရဟံ ဂုဏျတျောကို ပှားမြားနလြှေငျ နှလုံးသားတောငျ ထိပျပျေါမှာအရဟံစတေီ တညျနခွေငျးပါပဲ။
သဒ်ဓါဆိုတဲ့ မွသေားကြောကျသားတှေ နဲ.ပွညျ့စုံရ ပါမယျ။ အရဟံ၏ အနကျအဓိပ်ပါယျကိုသသေခြောခြာသိရပါမယျ။ ပှားမြားခွငျးရဲ.တနျခိုးသတ်တိတှေ အပျေါမှာ ယုံကွညျ ရမယျ။ ယုံကွညျတဲ့သဒ်ဓါ၊ သိမွငျတဲ့ ပညာနဲ.အထပျထပျ ပှားမြားနရေငျ နှလုံးသားမှာ အရဟံစတေီတျောမွတျကွီး တဖွညျးဖွညျး မွငျတကျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကနြျောတို.တတှကေပါဠိလူမြိုးတှေ မဟုတျတဲ့ အတှကျ အရဟံ၊အရဟံလို.ပါဠိသကျသကျ ခညျြးရှတျရမှာမဟုတျပါဘူး။” အရဟံ – ကိလသော ကငျးစငျတျောမူသောမွတျစှာဘုရား ” မွနျမာအနကျနဲ.တှဲရှတျရပါမယျ။
၅. ဆရာတျောကွီးမြား ရှငျးလငျးခကျြ။
ဥပမာ…” အရဟံ”လို.ပုတီးတဈပတျ ၁၀၈လုံးရှတျနေ တဲ့အခါ ကိလသောကငျးစငျတျောမူသောမွတျစှာဘုရားဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပျေါမှာ အာရုံမရောကျတော့ ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ကိလသော ကငျးခွငျးဆိုတဲ့ စိတျအရညျ အသှေးပျေါမှာ အာရုံမရှိတဲ့ အတှကျ မိမိရဲ.အရဟံစတေီဟာ သိပျပွီးကွညျညိုဖှယျ မရှိ၊ မသပ်ပါယျတော့ပါဘူး။
ဘာဝနာဆိုတာက စိတျ၏ အလုပျပါ။ စိတျ၏ စှမျးရညျ မပွညျ့ဝသေးရငျ တနျခိုးသတ်တိတှေ ကလညျးမစှမျးနိုငျတော့ပါဘူး။ ဂုဏျတျော အပျေါမှာကွညျညို နှဈသကျဝမျးသာ ငွိမျးအေးပီတိအားကောငျးနဖေို.ကအလှနျအရေးကွီးပါတယျ။
ပွငျပမှာတညျထားတဲ့ ဘုရားက အလကားနရေငျး အလိုအလြောကျ ကိုယျ့ကို လာပွီး ကြိုးမပေးပါဘူး။ ကိုယျ့နှလုံးသားမှာတညျတဲ့ ဘုရားက သာတနျခိုးအကွီးဆုံးပါပဲ။ သနျးဝငျး
” အမျိုး သမီး များ မီးယပ် သွေးဆုံးခြင်း အတွက် ဆေးနည်း ..”
” ” အင်းစိန်ထောင် အတွင်း မှ ပရလောကသားများ …” ” ဖြစ်ရပ်မှန် အပိုင်း – ၃
ရေမလို လက်သန့်ဆေးရည် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ် နည်းလေး…..အများသိအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါနော်
မတူညီတဲ့ ဝေဒနာ ( ၂၁ )ခု ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် အိမ်တွင်းဆေး တစ်ခွက် ပြုလုပ်နည်း